Farmaajo wuxuu lasoo baxay dhaqankii laga dhaxlay Xukunkii 21-ka Sano | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo wuxuu lasoo baxay dhaqankii laga dhaxlay Xukunkii 21-ka Sano
Shaki kuma jiro in Farmaajo Soomaaliya ku xukumayo dhaqankii laga dhaxlay xukunkii kaligii-taliska 21-ka sano, kaas oo sabab u noqday dagaal, bur iyo barakac. Waxaa wali muuqda dhaawacyadii colaadda Gaar ahaan umadaan ka soojeeda D&M.
Madaxweyne Farmaajo waxaa lagu aray dhaqan-xumo siyaasadeed, waayo waxay caado u noqotay inuu ku dhaqmo wax ka baxsan dastuurka u yaalla dalkan u nugul inay dhibaato kasta ka dhaco marwalba.
Farmajo oo mudo kooban Ra’iisul wasaare ka noqday 2010-kii dowladda Sheekh Shariif ayaa ku guuleystay xukunka February 8, 2017 kadib markii ay Qatar ku bixisay doorashadiisa lacag aad u badan.
Waxaa beenowday sheegashadiisa inuu yahay “isbadal doon waddani ah”, taasoo hadda micnaheeda noqotay “bur-buriye aan waddani dhab ah ahayn” isagoo uga tagaya dalka dhaxal xun.
Caburinta Saxaafadda iyo Xuquuqul qowlka, dabagalka mucaaradka, isku dirka siyaasaddeed ee beelaha Soomaliyeed iyo isku milanka argagixisadda Al-Shabaab iyo Xafiisyadda Sirdoonka & Milliteriga ayaa kamid ah hogaanka Madaxweyne Farmaajo.
Afgambi dadban ayaa dalka ku qabsaday, isagoo meesha ka saaray dhaqankii soo jireenka ee ahaa in afartii sano mar la qabto doorashooyin madax-bannaan, ha noqdaan kuwa dadban ama qof iyo cod.
Ku dhawaad afartii sano ee la soo dhaafay, dowladda Farmaajo waxay marar daban jebisay islamarkaana baalmartay sharciga, waxay Itoobiya u adeegsatay Dhibaataynta shacab waxaba galabsanin iyo qof muwaadan ah ilaahada si sharqidaro ah xabsi ugu Jiro muwaadin Mukhtaar Roobow iyo waxay Itoobiya u dhiibtay Qalbi-Dhagax, waxay caburisay xorridda hadalka, iyadoo ku tumatay xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha.
Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in laga gudbo dhaqan-xumada siyaasadeed, loona gudbo dowlad-wanaagga iyo dimuqraadiyadda, oo ah kuwa looga bixi karo xaaladda mudada fog dalka ku jiray.
C/raxmaan Baadiyow iyo sisaasiin ka soojeeda koonfur soomaaliya ayaa sheegay in kasta oo 30 sano kahor ay burburtay dawladii militeriga, hadana waxaa welli nala socda fikirkii, ficilkii, erayadii iyo dhaqankii dawladnimo ee laga dhaxlay. Meel kasta waxaa lagu arkaa dhaqanka kali-talisnimada, Guulwadeynta” iyo xadgudubka xuquuqda insaanka.
Farmaajo wuxuu isbahaysi la yahay Fahad Yaasiin, oo fekerkiisu yahay in Soomaaliya ay u taliyaan kooxaha xagjirka ah, isagoo lagu xasuuto inuu taageeri jiray Al-Islaax, Maxkamadihii iyo Al-Shabaab.
Waxay qorsheeyeen nidaam lagu musuqmaasuqo doorashooyinka soo socda, iyadoo la adeegsanayo Ciidamada amniga iyo hantida dadweynaha. Si Farmaajo mar labaad mugdi ugu hogaamiyo Wadanka.
Beesha Caalamku waqti iyo cudur daar uma hayso inay ka hortagto masiibadaas siyaasadeed iyo mida amni ee soo socda.
Go’aamo deg deg ah oo cad ayaa la filayaa kahor inta shacabka aysan sameyn kacdoonka ka dhan ah kaligii talisnimada iyo damaca arxan daran ee Madaxweyne Farmaajo.
aniguu ka warbaahin ahaan waxaan ifiinaynaa waxa soo socoda hadaanunahay bahada warbaahinta ku midowday SMC KOONFURTA SOOMAALIYA
Previous articleWadooyinka ugu muhiimsam Muqdisho oo xiran
Next articleXog hoose:Teliyaha Hogaanka Dabagalka NISA Gedo lagu wareejiyey